SIDEE LOOLA TACAALI KARAA COLORADO BARADHO BARADHO: TILMAAMAHA ISTICMAALKA DAROOGADA "TABOO" EE BARANDHADA - BARADHADA
Noocyada isticmaalka daroogada "Taboo" ee looxa shaqeynayo baradhada
Beeraley kasta oo dhan waxaa la kulantay dhibaatadan oo kale sida cunista baradho by Colorado baradho baradho, iyo isku dayaya in uu helo xalkiisa ugu fiican ee la dagaallanka cayayaanka this. Waayo-aragnimadu waxay muujinaysaa in sunta ka soo baxdo baradiidka Colorado barafka, la kariyey sida "cunto guri", ma keenaan saamaynta la rabay, sidaas darteed badanaa iyo badanaa, baradho badan ayaa isticmaala Taboo, taas oo shaqo fiican u leh lamid ah. On sida loo isticmaalo "taboo" si loo soo saaro baradho, iyo sidoo kale tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan isticmaalka daroogada, waxaan ka fiirsan doonaa maqaalkan.
Taboo loogu talagalay baradhada barafka - macluumaadka guud
Macnaheedu waa "Taboo" loogu talagalay samaynta baradho waa daroogo adag oo ah wuxuu leeyahay mudo dheer oo sharci ah - 40-45 maalmood. Faa'iidada muhiimka ah ee daroogada sidoo kale waa mid la heli karo iyo sahlan isticmaalka. Tabu waa ka qaalisan caymisyada kale, hase yeeshee waxay ka fiican yihiin iyaga.
Ma taqaanaa? Inkasta oo Taboo yahay diyaargarow firfircoon, waxay u fiicantahay in la isticmaalo iyada oo la isticmaalayo cayayaanka kale ee lagu xakameeyo baradho.
"Taboo" oo ka mid ah caleemaha ayaa ka shaqeeya dhammaan xaaladaha cimilada, taas oo muhiim u ah, tan iyo markii uu ka soo horjeeda soo saarka baradiidka Colorado inta badan waa arimaha dibadda ee yareeya dadaalka beeralayda si aan waxba. Thanks to daroogada this "Taboo" si loo soo saaro baradho copes leh hawsha, kaas oo la xaqiijiyay by dib u eegista ee bannaanka u isticmaalaya qalab this.
Waxyaabaha kiimikada iyo foomka sii deynta
Ka hor intaanad bilaabin isticmaalka daroogada, waa inaad si taxadar leh dib u eegtaa kiimikada sheyga. Maaddooyinka firfircoon ee daroogadu waa imidacloprid, wakiilka fasalka neonicotinoids, qiyaas ahaan 500 g / l. Walxaha gargaarka ah waa macmacaan, antifreeze, dhejisey, kala-qaadis kala duwan, iyo sidoo kale dheeha iyo qoynta qoynta. Qalabka waxaa lagu soo bandhigaa qaab diyaarsan. Badanaa, cayrinta waxaa laga heli karaa gasacadaha caagga ah qiyaasta 1 litir iyo 5 litir, inkastoo ay jiraan 10 ml oo muraayadda dhalada ah oo iib ah.
Waa muhiim! Daawada "Taboo" ayaa la baadho muddadii u dhaxaysey 2008 ilaa 2010, waxayna muujisay natiijooyin cajiib ah: sababtoo ah tayada kiimikada tayada leh ee waxyeellada qaaxada ayaa hoos u dhacay 84.2%.
Farsamaynta ficilka "Taboo"
Thanks to walxaha ka mid ah daroogada, "Taboo" ayaa xannibaya dhalidda cayayaanka laga bilaabo wakhtiga abuurka baradho. Waa daawo leh ficil-xirmo-xiidmeed, waxay gashaa habka neerfaha ee cayayaanka oo sababa curyaan. Maalmo badan ayaa cayayaanku joojiyaa quudinta iyo dhimashada. Intaa waxaa dheer, saamaynta daroogada ayaa ku jirta xaqiiqda ah in ka dib marka la sameeyo xarig ama carrada hareeraha digriiga, jawi wax ku ool ah ayaa la sameeyay, taas oo ka caawisa inay horumariyaan.
Ma taqaanaa? "Taboo" sababtoo ah muddada dheer waxay ilaalinaysaa qalabka beeraha ilaa 2-3 curinimo muuqda.
Farsamaynta ficilada tabuucda ayaa sidoo kale go'aamisa inta kala duwan ee codsigeeda: Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo gabbaldayaha iyo hadhuudhka, dabocase, kufsiga, soybean, sarreen. Intaa waxaa dheer, daroogooyinka daroogada ee ku saabsan cayayaanka sida qajaar, dhul-beereedka dhulka, cicadas, iyo aphid cows.
Tilmaamaha isticmaalka daroogada "Taboo"
Ka hor inta aan la isticmaalin Taboo ka soo duuduubka baradhada Colorado, waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato tilmaamaha isticmaalka cayayaanka, maadaama ay tahay daroogo sun ah, iyo isticmaalka aan habooneyn waxay wax u dhimaysaa dalagyada xididka mustaqbalka.
Goorta la shaqeynayo
Isticmaal "taboo" waa lagama maarmaan in habka loo beerto baradhada. Tani waxay sabab u tahay habka waxqabadka, maadaama daroogada loogu talagalay gaar ahaan loogu talagalay in lagu galo khudaarta cagaaran.
Waa muhiim! Daawada "Taboo" ka dib marka la soo dego ma khuseeyaan!
Sida loo diyaariyo xal
Si loo sameeyo habka dhirta si ay u noqoto mid guul leh, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo abuuro Taboo loogu talagalay processing baradho. Waxaa lagama maarmaan ah ma aha in si sax ah loo isticmaalo daawada, laakiin sidoo kale u kari sida ayadoo loo eegayo xaddiga walxaha aad qorsheyneyso in la hirgeliyo. Tusaale ahaan, 100 kg oo ah wax soo saarka waxaad u baahan doontaa 1 litir oo biyo ah iyo 8 ml oo ah "Taboo", oo mid ka mid ah dhagxin waxaad u baahan doontaa 6500 ml oo biyo ah iyo 2.5 litir oo ah daroogada.
Ma taqaanaa? Ku kaydi xal loo diyaariyey wax ka badan 24 saacadood, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho kaneecadda isla markiiba.
Inta lagu jiro diyaarinta, xalka waa in si joogta ah u kiciyaa ama gariiraa.
Qallajinta baradhada leh daroogada "Taboo"
Waxaa jira laba siyaabood oo loo isticmaalo daawada "Taboo": Badeecadda baradhada iyo wax lagu sameeyo carrada. Waxaa ugufiican in lagu buufiyo daroogada adigoo isticmaalaya qalab gaar ah oo ku siin doona codsi isku mid ah.
Wixii daaweyn horudhac ah ee ciidda waxaa lagama maarmaan ah in ay si siman u buufiyaan qalabka ay ku jiraan grooves. Ka hor inta aadan baradhada ka shaqeynin ka hor intaan la beeri lahyn caawinaada "Taboo", bataatiga waa in la xalliyaa, ka saara miraha waxyeello leh. Markaas waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid baradho ah on dusha flat iyo hannaanka dareeraha. Dhowr daqiiqadood oo ah qalabka wax lagu shaqeynayo waa in la qalajiyo, ka dibna waxaa lagu beeray karaa dhulka.
Ku habboonaanta daroogada oo leh habab kale
Taboo waxaa loo isticmaali karaa fungicides si looga hortago ma aha oo kaliya cayayaan cayayaanka, laakiin sidoo kale in lagu daaweeyo iyo ka hortagga cudurada. Qalabka ayaa si fiican ula xariira daawooyinka sida "Vial Trust", "Bunker" iyo kuwo kale.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la isku darin lacagaha, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tijaabo adoo isku dardaraya diyaarinta, haddii ay soo ifbaxdo natiijada isku dhafanaanta, waxaa wanaagsan in aan la isticmaalin lacagtan waqti isku mid ah.
Tallaabooyinka badbaadada ee xaaladaha shaqada iyo kaydinta daroogada "Taboo"
"Tabu" waa daroogo aad u sun ah, sidaa darteed markaad la shaqeyneysid, waa inaad iska ilaalisaa adigoo xiraya gacmo gashi iyo neef-qabe ama adigoo isticmaalaya faashad faashad. Sida suurtogalka ah in la isticmaalo wakiilka jidhka bini'aadamka inta lagu jiro isticmaalka baradhada, xaqiiqda waa laga tirtiri karaa isla markiiba, sababtoo ah dhammaan walxaha sunta ah waxay ka tagaan dalagga geedka ka hor goosashada. Ku kaydi "Taboo" waxaa lagu talinayaa meel qallalan, oo laga ilaaliyo qorraxda tooska ah iyo meel aan carruurtu gaarin.
Isticmaalka daroogada - geedi socodku waa mid fudud oo uma baahna dadaal badan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa u hoggaansanaanta qawaaniinta qiyaasta iyo heerarka amniga, kadibna dalaggaaga ayaa laga ilaalin doonaa cayayaanka.